विचार | Corporate Nepal
काठमाडौं । प्रखर विश्लेषक सौरभले नेपालका प्राकृतिक सम्पत्तिहरुको प्रयोग गर्न सकियो भने नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय कुवेत र कतारको भन्दा धरै हुनसक्ने बताएका छन् । सोमबार राति एपीवान टेलिभिजनको एक कार्यक्रममा उ…
पुरक बजेट बिना कोभिड खोप खरिद र निर्वाचन खर्चको जोहो सम्भव छैन: आचार्य
केशब आचार्य, मुलुकमा प्रतिनिधी सभा विघटन भएको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ, यद्यपी निर्वाचन हुने वा नहुनेबारे समाजका आ आफ्नै धारण देखिन्छन् । कोरानाका कारण अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ । कोरो…
कोभिडले हाम्रो अर्थतन्त्र खल्वल्याएको छ । कोभिडको कारण गत आर्थिक वर्षमात्रै जीडीपीमा १ खर्व, ९८ अर्व क्षति भएको तथ्यांक आएको छ । १५ लाख, ६७ हजारले रोजगारी गुमाएका । नेपालमा कोभिडले १२ लाख नागरिक गरिवीको रेखामुनी …
काठमाडौं । पूर्वमहान्याधीवक्ता एवं कानुनविद् प्राडा युवराम संग्रोलाले नेपालको शासकहरु गरिव जनताको हितभन्दा आफ्नो सुखसुविधामा रमाउँदै गएको औंल्याएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले हुनेखान…
नेपालको साच्चै विकास गर्ने हो भने ‘निरंकुश लोकतन्त्र’ चाहिन्छः कँडेल
ई. दिपेन्द्र कँडेल काठमाडौं । नेपालका लागि निरंकुश भन्ने शब्द अपेचिलो हुनसक्छ । किनभने हामीले राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्था निरंकुश भयो भनेर विरोध गर्यौं । निरंकुशताविरुद्ध लडेर २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आयो भन्दै…
महाप्रसाद अधिकारी कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा पहिले विश्व अर्थतन्त्रमा जुनखाले त्रास थियो, त्यो अहिले छैन् । अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा राम्रो रिकभरी भइरहेको छ । भारतकै कुरा गर्दा पनि अर्थतन्त्र क्र्याक होला भन्ने थिय…
बैंकहरु अहिले पनि सबल छन्, अर्थतन्त्र चाँडै पुनर्उत्थान हुन्छः भुवन दाहाल
कोभिड-१९ को नकारात्मक प्रभावले गर्दा हामी सबै असहज स्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं । अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा आउन थप केही समय लाग्ने भएता पनि केही क्षेत्र बाहेक अधिकांश क्षेत्रहरु हाल संचालनमा आएकाले आशाको सञ्चार भएको …
महाप्रसाद अधिकारी, काठमाडौं । अहिले देशको आर्थिक परिसूचकहरु सुधारोन्मुख हुँदैछन् । मुद्रास्फिति ४.३३ प्रतिशत छ, बाह्य क्षेत्र उत्साह जनक छ । करेन्ट एकाउण्ट पनि बचतमा छ । वैदेशिक सञ्चिति पनि राम्रो छ । निक्षेप र क…
प्राडा युवराज संग्रौला राज्यको सुदृढीकरण र जनताको खुसी नै राष्ट्रको विकास हो। के यो प्राप्त गर्यौ हामिले ? होइन गरेनौं । म तपाईंहरुसँग केही तथ्यांकको कुरा गर्न चाहन्छु, र भन्न चाहान्छु राजनीतिलाई बदनाम नगर्नुहो…